Kia ရဲ့ စိတ်ပျက်စရာ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဖြစ်မသွားအောင် အဓိက ကယ်တင်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ SUV ကားများ ! – MyMedia Myanmar
Kia ရဲ့ စိတ်ပျက်စရာ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဖြစ်မသွားအောင် အဓိက ကယ်တင်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ SUV ကားများ !
ကား ကုမ္ပဏီ အတော်များများကတော့ အခုချိန်မှာ သူတို့ရဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၂၀ ခုနှစ် Q4ကာလ ရောင်းအား တွေကို ထုတ်ပြန်ဖို့ တွက်ချက် နေကြပြီ ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါရဲ့ အနှောက် အယှက် က အတော်လေး ကြီးမားနေပေမယ့်လည်း တစ်ချို့သော ကားကုမ္ပဏီ တွေကတော့ ထင်မှတ်မထား လောက်အောင်ကောင်းမွန်တဲ့ အရောင်းစံချိန် တွေကို ရရှိခဲ့ကြတာ ကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ Q3နဲ့ e-Tron တို့လိုမျိုး နာမည်ကြီး မော်ဒယ်တွေကြောင့် Audi ကုမ္ပဏီ ဟာလည်း သက်တမ်းတစ်လျှောက် Q4ကာလ‌အကောင်းဆုံး ရောင်းအားကို ပိုင်ဆိုင်နိုင် ခဲ့သလို အထင်ကြီးစရာ အောင်မြင်မှုတစ်ရပ် လည်း ဖြစ်ခဲ့ ရပါတယ်။ အခုဆိုရင်တော့ ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ Kia ဟာလည်း သူ တို့ရဲ့ ၂၀၂၀ ခုနှစ် Q4ရောင်းအားတွေကို ချပြခဲ့ပြီ ဖြစ်ကာ Year-On-Year အရောင်းပိုင်းမှာ တော့ ၅ ရာခိုင်နှုန်း မြင့်တက် ပြီးအဆုံးသတ် နိုင်ခဲ့ကာ ကိုရီးယား ဝမ်ပမာဏ 16.91 Trillion ($ 15.2 Billion) လောက် ရောင်းချ ခဲ့ ရပါတယ်။
Photo Credit: CARBUZZ
Kia ရဲ့ စတုတ္ထ လေးလပတ် ရောင်းအားကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်ကထက် သာလွန်ခဲ့ သေးတာ ဖြစ်ပြီး တစ်နှစ်ကျော် ကာလ တုန်းက တော့ 1.28 Trillion ( $ 1.1 Billion ) အထိပဲ ရောင်းချ ခဲ့ရတာ ဖြစ်ကာ အသားတင် အကျိုးအမြတ် အနေနဲ့ကတော့ 976.8 Million KRW ( $ 881 Million ) အထိ ရှိခဲ့တာပဲ ဖြစ်တာကြောင့် တစ်နှစ်ကျော်ရဲ့ ကာလတူနဲ့ နှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင်တော့ 182 Percent လောက် အထိကို မြင့်တက်လာခဲ့တာပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၂၀ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ လနဲ့ ဒီဇင်ဘာ လ အတွင်းမှာတော့ Kia ဟာ ကမ္ဘာ တစ်ဝှမ်းကား အစီး ရေ ပေါင်း ၇၄၂,၆၉၅ အထိ ရောင်းချ ခဲ့ရပြီး ယခင် တစ်နှစ်က ကာလတူ ရောင်းအားဖြစ်တဲ့ ၇၄၂,၇၃၃ နဲ့ ယှဉ်ရင်တော့ အနည်းငယ်လေး ကျဆင်း သွားခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ ကာလအတွင်း ကိုရီးယားနိုင်ငံ ဈေးကွက်ကတော့ ရောင်းအား ကျဆင်းခဲ့ရတာ ဖြစ်ပြီး အစီးရေ ၁၃၂,၃၈၉ နဲ့ ၅.၂ ရာခိုင်နှုန်းလောက် ကျဆင်းခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကုမ္ပဏီရဲ့ အခြားသော ပြည်ပဈေးကွက် တွေမှာတော့ ၁.၂ ရာခိုင်နှုန်း လောက်အထိ မြင့်တက်ခဲ့ပြီး အစီးရေ ၆၀၅,၃၀၆ အထိ ရောင်းချခဲ့ရကာ အမေရိက နဲ့ အိန္ဒိယဈေးကွက်တွေ အထဲမှာ ရောင်းအား တက်ခဲ့ရတာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Kia အနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ Q42020 ကာလ အတွင်း ရောင်းအားကောင်းအောင် ထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ ရာမှာတော့ Telluride ၊ Seltos နဲ့ Sorento တို့လို SUV ကား ရောင်းအားတွေက အဓိကကျခဲ့တဲ့ အပြင် Carnival Minivan ဟာလည်း အရေးပါခဲ့ပြန် ပါတယ်။ Kia ရဲ့ SUV နဲ့ Minivan တွေ ရောင်းအားကတော့ ကုမ္ပဏီရဲ့ အမျိုးအစား အားလုံးပေါင်း ရောင်းချ ရမှုရဲ့ ၅၈.၇ ရာခိုင်နှုန်း အထိ ကို ရှိခဲ့တာ ဖြစ်တာကြောင့်အမြင့်ဆုံးဝေစု တစ်ရပ်လည်း ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း SUV ကားတွေအပေါ် ကြိုက်နှစ်သက်ကာ လိုချင် နေတဲ့ သူတွေ ‌များနေသေးတယ် ဆိုတာ ကိုတော့ ကောင်းကောင်း သက်သေပြသွားခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ထဲမှာတော့ Kia ရဲ့ Revenue ပမာဏ ဟာ ၁.၈ ရာခိုင်နှုန်း အထိ တိုးတက် ခဲ့ပြီး KRW 59.17 Trillion ( $ 53 Billion ) လောက်အထိရရှိခဲ့တာဖြစ် ကာ Operating Profit အနေနဲ့က‌တော့ ၂ ရာနှုန်း တိုးတက် ခဲ့ပြီး KRW 2.1 Trillion ( $ 1.8 Billion ) အထိ ရှိခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း အခြား တစ်ဖက်က Net Profit ကတော့ ၁၇.၇ ရာနှုန်း အထိ ပြန်လည် ကျဆင်းခဲ့ရပြီး KRW 1.5 Trillion ( $ 1.3 Billion ) အထိ ရှိခဲ့တာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်နှစ် ၂၀၁၉ နဲ့ ယှဉ်မယ် ဆိုရင်တော့ Kia ရဲ့ ကမ္ဘာ လုံးဆိုင်ရာ ဈေးကွက် ဟာ ၇.၆ ရာနှုန်း လောက် အထိ ကျဆင်းခဲ့ရပြီး ၂၀၂၀ ခုနှစ်မှာ ကား အစီးရေ ပေါင်း ၂.၆၁ မီလီယံ လောက် ရောင်းချ ခဲ့ရတာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အထူး သဖြင့်တော့ ကိုရီးယား ဈေးကွက် အတွင်းမှာ အစီးရေ ပေါင်း ၅၅၂,၄၀၀ အထိ ရောင်းချ ခဲ့ ရပြီးအခြား သော ကမ္ဘာ့ ‌ဈေးကွက် တွေ အထဲမှာတော့ 2.05 Million လောက် အထိ ရောင်းချ ခဲ့ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာပဲ ပြောပြောအခု ရှေ့လျှောက် ၂၀၂၁ ကတော့ Kia အတွက် စိတ်ဝင်စား စရာ နှစ်တစ်နှစ် ဖြစ်လို့လာပါပြီ။ ကိုရီးယား ကား ကုမ္ပဏီ အနေနဲ့ ကတော့ အခုနှစ်မှာ ၁၂.၁ ရာခိုင်နှုန်း လောက် အထိ ရောင်းအားမြင့်တက် ဖို့ ရည်မှန်းထားခဲ့ပြီး အစီးရေ ၂.၉၂ Million အထိကို ရောင်းချ နိုင်ဖို့ အတွက် စီစဉ် နေခဲ့ပြီ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုရီးယား ဈေးကွက်အတွင်းမှာတော့ အခု ၂၀၂၁ ထဲမှာ အစီး ရေ ပေါင်း ၅၃၅,၀၀၀ လောက် အထိ ရောင်းချ နိုင်ဖို့ အတွက် ကြိုးစားနေပြီး အိမ်ရှင် နိုင်ငံ ပြင်ပ ဈေးကွက် တွေ မှာတော့ အစီးရေ ပေါင်း ၂.၃၉ Million အထိ ရောင်းချ နိုင်ဖို့ စီစဉ် နေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သူတို့ရဲ့ အခု တစ်ခေါက် ရည်မှန်းချက် ကတော့ တော်တော် လေး ကြီးမား ပြီး မကြာခင်မှာ ပဲ သူတို့ရဲ့ လျှပ်စစ် စွမ်းအင် သုံး Lineup ကိုလည်း ဖြန့်ချိသွားတော့မှာဖြစ်ကာ ပထမဆုံး Dedicated လျှပ်စစ် ကား Platform အသစ်ကိုလည်း Hyundai Motor Group ရဲ့ လျှပ်စစ် စွမ်းအင် သုံး Global Modular Platform နဲ့အတူ ပူးပေါင်းဖန်တီး ကာ ထုတ်လုပ်တော့မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Kia ရဲ့ ပထမဆုံး လျှပ်စစ်စွမ်းအင် သုံးသီးသန့် ကားအသစ် ကိုလည်း အခုနှစ် ပထမ လေးလ ပတ် အတွင်းမှာတင်ပဲစတင် ဖြန့်ချီဖို့ စီစဉ်နေပြီ ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ ကားကတော့လာမယ့် ၂၀၂၇ အမှီ အသစ်ချပြသွားမယ့် လျှပ်စစ် ကားအသစ် ၇ မျိုးထဲက ပထမဆုံး တစ်မျိုးလည်း ဖြစ်လာနိုင် ပါတယ်။
The post Kia ရဲ့ စိတ်ပျက်စရာ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဖြစ်မသွားအောင် အဓိက ကယ်တင်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ SUV ကားများ ! appeared first on MyCars Myanmar.
MyMedia Myanmar2021-01-31T20:00:41+06:30January 31st, 2021|MYCARS MYANMAR|
Toyota ရဲ့ ဒီဇယ် အင်ဂျင် ကို ဓာတ်ဆီနဲ့ မောင်းနှင်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ကြတဲ့ ရုရှား !
နယူးယောက် ကားပြပွဲမှာ မြင်တွေ့လာရပြီ ဖြစ်တဲ့ Hyundai Elantra N !
Toyota ကို လျှပ်စစ်ကားလောကထဲ အရောက်ပိုမယ့် 2023 Toyota bZ4X ကား !
၃၇ နှစ်သက်တမ်းရှိ Land Cruiser 70 ကို 2022 အထိ Update ပေးနေဆဲဖြစ်တဲ့ Toyota !
မယုံနိုင်ဖွယ် Dealer Markup ကို ရရှိခဲ့ရတဲ့ Mitsubishi Mirage ကား!
တရုတ် ဈေးကွက် အများစုနဲ့ အကောင်းဆုံး နှစ်ဝက်ရောင်းအားကို ပိုင်ဆိုင် နိုင်ခဲ့တဲ့ Bentley !
Body Kit အလန်းစားနဲ့ အတူ Sport အသွင်သစ် ကိုမြင်နေရတဲ့ BMW X7!
မောင်းသူမဲ့ စနစ်နဲ့ Convertible Sports ကား တစ်စီးကို ချပြလာတဲ့ Audi !
ပိုကြီးတဲ့ ဘက်ထရီ၊ ပိုများတဲ့ စွမ်းအင်နဲ့ အတူ မြင်တွေ့လာရမယ့် 2023 Mitsubishi Outlander Plug-In Hybrid !
မေးခွန်းထုတ်စရာ အပြည့်ဖြစ်နေတဲ့ Mazda ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခု!
စတင် အသုံးပြုနိုင်ပြီ ဖြစ်တဲ့ Lamborghini ရဲ့ ပထမဆုံး ဇိမ်ခံ ရွက်လှေ!
လျှပ်စစ် စွမ်းအင်ဘက်ကို သွားဖို့မရှိသေးတဲ့ Alpina !
ပုံမှန် S Pen ထက် ၂ ဆ စျေးကြီးနိုင်တဲ့ Galaxy Z Fold3ရဲ့ S Pen Pro
August Security Patch ကို ရရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ Samsung Galaxy S21 Series
ရမ်ဆေးက ဂျုဗင်တပ်စ်အတွက် အရေးပါတဲ့ ကစားသမားတစ်ဦး ဖြစ်လာမယ်လို့ အယ်လီဂရီပြောဆို